Caawimaada Caafimaadka Maskaxda iyo Rugta caafimaadka ee Ku Saleysan Dugsiga
Mental Health - Somali
Health Services > Mental Health Support and School Based Clinics > Mental Health - Somali
Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis waxay leeyihiin adeegyo caafimaadka maskaxda ku saleysan oo loogu talagay ardayda marka iskuulka waxbarashadiisu u socoto. Waxaan sii wadnaa inaan ka fikirno sidii aan u taageeri lahayn bulshadeena waxbarashada inta lagu jiro waqtigaan ay iskuuladu u xiray yihiin xaalada COVID-19.
Ardayda hesha adeegyada caafimaadka maskaxda ku saleysan ee dugsiga
Sidii ay qoysaska iyo daryeelayaashu u taageeri karaan ardayda.
La-talin BILAASH ah oo ku saabsan walwalka, walaaca iyo diiqadda ayaa heli kara ardayda iyo qoysaska MPS: 612.767.8659
Rugaha Caafimaadka ee Iskuulka
School Based Clinics located in MPS high schools are doing telehealth appointments inta lagu gudajiro xirnaansjaha iskuulada. Ardayda ayaa u qori kara ama ku dhhafi kara fariimaha codka taleefanka xarunta; kalkaaliyayaasha caafimaadka si joogto ah ayey u hubinayaan fariimaha.